I-FreedomPop yamkela i-4G kunye neefowuni zakudala eSpain | Iindaba zeGajethi
I-FreedomPop yamkela i-4G kunye neefowuni zakudala eSpain
Sithanda ukuba abasebenzisi bethu baxelelwe kuyo yonke into enxulumene nehlabathi unobuchule, kwaye ngaphandle kwamathandabuzo, umnxeba yinto ebalulekileyo. Sonke sifuna ukonwabela olona nxibelelwano lulungileyo, kodwa kuhlala kungavisisani nokuba lolona qhagamshelo lunexabiso eliphantsi, ke InkululekoPop Cwangcisela ukufumanisa indawo ye-Iberia ngenjongo yokunikezela ngenye indlela kweyona telemarketer ixhaphakileyo.
Kungenxa yoko le nto beyila kwaye besebenzela ukuvula isikhewu esincinci, ukuza kuthi ga ngoku i-FreedomPop khange ikwazi ukuzinyanzela kule marike inyukayo. Mhlawumbi ngale ntshukumo intsha bayakufumana ukuqeshwa okutsha, yiyo loo nto I-FreedomPop isungula inkonzo entsha ekwaziyo ukusebenzisa amathuba eenethiwekhi ze-4G kwaye ibeka iminxeba yeVoIP ecaleni eSpain.
Kwaye olu tshintsho alungomdlalo, ukuba sele ungumsebenzisi weNkululekoPop kwezi ntsuku zimbalwa zizayo uyakufumana umnxeba weqela lenkampani ukuba likunike utshintsho lweSIM, kuba ngoku inkonzo yenethiwekhi iya kubonelelwa ngumsebenzisi owahlukileyo, kwaye konke oku akuyi kuba nazindleko kumsebenzisi, eyeyona ilungileyo kuyo yonke loo nto. Isicwangciso sasimahla siya kuqhubeka nokubonelela ngemizuzu eyi-100 kunye ne-200MB kubo bonke abasebenzisi ngaphandle kokuhlawula i-euro enye. Mhlawumbi elona nqanaba linomdla lelona lisinika i-2GB yedatha yeselfowuni kunye neefowuni zesiko ezingenasiphelo ze- € 8,99 kuphela ngenyanga.
Kufuneka iqatshelwe ukuba ngoku iFreompompop ngoku ikuvumela ukuba ufake inombolo yakho kuyo nayiphi na inkampani yefowuni, ukusuka apha unako Cela ikhadi lakho leFreompompop. Into ebalulekileyo kukuba sijongane nenkonzo nge idatha yasimahla yeselfowuni, onokuyijika kwisitrato uye elona nqanaba liphezulu lokuhamba. Ukuba ufuna ukwenza ikhontrakthi kwinqanaba lakho kunye neFreepPop ungayenza LAPHA. Le nkampani ifuna ukuvula umsantsa kwimfonomfono yendabuko iyaqhubeka nokwenza izinto ezintsha ngokunikezela ngamazinga okuhlaselwa sisifo sentliziyo, ixesha elifanelekileyo lokucinga ngako.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-FreedomPop yamkela i-4G kunye neefowuni zakudala eSpain
Wamkelekile kwi-FreedomPop 4G. Isibonelelo esihle.
Isicoci seRoomba sicoce indlu yakho kwaye sihlola kuyo
Le teknoloji iya kukuvumela ukuba uhlawule imoto yakho okanye ibhetri yeselula ngemizuzwana